Lehibe tsy meloka, tsy mba diso…
Tsy misy tsy vaky vava ny amin’ny tsy fahombiazan’izao fitondrana izao. Efa samy niala nenina ny amin’izany ny fiangonana, ny antoko politika, ny firaisamonina sivily… Inona no eo? Manilika fotsiny ny tsy fihombiazana amin’ny lasa sy ny hoe mpanohitra ny mpitondra, fa tsy mahadini-tena amin’ny tsy fisian’ny politika mazava, fomba fiasa…
Tsy nisy nahavita inona, hono, ny mpitondra nifandimby, na tsy nisy nahavita ny vitan’izao fitondrana izao nandritra izay 50 taona mahery izay. Marina ve izany? Fanamarinan-tena, fandokafan-tena… Saika tsy nisy inona vita afa-tsy ny fitadiavana fahamarinan-toerana sy fitoniana politika nandritra ny fe-potoam-piasana… tsy fohy na foy.
Hadino na tavela tanteraka amin’izany ny fiainam-bahoaka. Izany ny mampihanaka sy mahamafy ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa, ny ady sy fandrobana tany… Ny mpitondra teo aloha nifandimby sy ny mpanohitra ve no mahatonga ny tsy fahitana vahaolana mahomby amin’izany?
Lazaina mandrakariva fa misy ny mpanakorontana, manelingelina tsy hisian’ny fahamarinan-toerana politika; eny, na hoe ambadika politika aza. Amin’izany, tsy mba mety miaiky ny fahadisoany sy ny tsy fahombiazany ny mpitondra. Lehibe tsy meloka, tsy mba diso… Vokany, tsy misy izay vahaolana azo antoka sy mahomby.
Tsy ny halemen’ny fanjakana ve, ohatra, no mampanjaka ny tsy fandriampahalemana, indrindra ny fakana an-keriny tato ho ato. Eo koa ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana, ny kolikoly avo lenta isan-tsehatra sy isan’ambaratonga… Nefa ailika fotsiny amin’ny lasa sy ny hafa ny tsy fahombiazana.
Vokatry ny tsy fahombiazan’ny teo aloha sy ny fanakorontanan’ny hafa ankehitriny koa ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa, ny ady sy fandrobana tany… ? Miala fa milaza ho tsy tomponandraikitra amin’izany ny mpitondra. Koa atao no inona izany mitonon-tena ho tsy manana andraikitra amin’izay mitranga izany? Mila fiheverana…